Ushone lingakafezeki iphupho lakhe
UNOMHLE Nkonyeni ehlonishwa nguMengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Isithombe: GCIS
CHARLES KHUZWAYO | July 11, 2019
ICHWABANSWANI lomlingisi wemidlalo yethelevishini namafilimu, uNomhle Nkonyeni, udlule emhlabeni esibhedlela ngoLwesithathu ekuseni lingakafezeki iphupho lakhe lokusungula isikole sokulingisa.
UNomhle (77) ubesemkhankasweni wokusungula isikole sezobuciko ebesezokufukula amaciko asesifundazweni adabuka kuso, i-Eastern Cape.
Wazalelwa elokishini eNew Brighton, ePort Elizabeth, ngo-Ephreli 9,1942. Ngo-2017 waba yilungu lomdlalo weTV iScandal, umlingiswa wakhe kuwuLulama Langa, owayengunina kaSiseko Langa (okuyindawo eyayilingiswa nguHlomla Dandala). Wangena emkhakheni wokulingisa ngokudlala emidlalweni yeshashalazi eneminyaka ewu-19. Wagqama kakhulu ngokulingisa emdlalweni weshashalazi owawuthi Die Swerfjare van Poppie Nongena eCapab (Cape Performing Arts Board) Theatre eCape Town ngo-1981.
Ube eselingisa emidlalweni eminingi yethelevishini okubalwa kuyo iTsha Tsha, Igazi, Society, Gaz’lam neminye.
UNomhle wake wavela efilimini iRed Dust nethi Catch A Fire. Ngemuva kweminyaka engaphezu kuka-50 eyibambile insimbi ishisa endimeni yezokulingisa, uNomhle wahlonishwa ngendondo yeLife Achievement Award kumaSouth African Film & Television Awards ngo-2016.
UMengameli Cyril Ramaphosa wamklomelisa ngendondo yeNational Order of Ikhamanga. Uhulumeni wase-Eastern Cape ubuye wamhlonipha ngokuguqula umgwaqo waseNew Brighton owawubizwa ngo-Aggrey Road wawuqamba ngeNomhle Nkonyeni Road. UNomhle ushone kade ezobonakala efilimini asanda kulingisa kuyo iKnuckle City ezokhonjiswa kwi-40th Durban International Film Festival (DIFF) yakulo nyaka.